Ilay Tia Tanindrazana Mpihinana Labiera Ankafizin’i Rosia Indrindra, Ankehitriny Nandoro, Nihinana, ary Nanitsakitsaka ‘20.000 Dolara’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2015 13:20 GMT
Stas Baretsky mamotika vola vahiny Tandrefana ho an'i Rosia Reny Malala, ary ho an'ny fakantsary iPhone sy Samsung. Ny 16 Septambra 2015. YouTube.
Lehilahy vaventy manao akanjo mena i Stas Baretsky izay vao tsy ela akory no hita tao amin'ny vaovao, satria tiany ny manaikitra boatin-dabiera. Rehefa manatanteraka izany fampisehoana izany izy, mipoaka mankany aloha ny labiera, ary manondraka ny tany eo ambany amin'ny raotra sy herotra. Indray mandeha hono, ny taona 2005 ka hatramin'ny 2008, mpikambana tao amin'ny vondrona rosiana malaza mpiangaly mozika Leningrad i Baretsky. Tamin'ity lohataona ity, noho ny habeny tsy mahazatra sy ny talenta ananany amin'ny famotehana alominiôma amin'ny nifiny, nanova ny anarany ho toy ny mpiady amin'ny fanafarana entana any amin'ny tandrefana i Baretsky.
Nasehony tamin'ity herinandro ity ny toko farany amin'ny fanafihany ny zavatra tsy Rosiana, rehefa nodorany, notsakoiny, nohitsakitsahiny, ary avy eo notondrahany tamin'ny labiera ny antontana dolara sy euro. Nilaza i Baretsky fa nahatratra hatramin'ny $20.000 ireo vola—izay voalaza fa tahiriny nandritra ny fiainany. Alohan'ny nandorany ny vola, nitodika tany amin'ny “mpandraharaha rehetra any Rosia” izy, nanasa azy ireo mba hanaraka ny ohatra nomeny, ary hanafaka ny tenan'izy ireo amin'ny vola vahiny misy mosavy. “Tsy maintsy mampiasa ny robla antsika isika,” hoy ny antsoantsony, ary avy eo nandrovitra “gazety vahiny” izy. (To a sandoka ireo vola izay nodoran'i Baretsky.)
Taorian'ny fahasarotana vitsivitsy tamin'ny fandrehetana ny vola, nampidirin'i Baretsky tao ambavany ilay antotam-bola, ary nalaina lahatsary sy sary izy tamin'izany. Nihazakazaka nanatona ny mpandalo ary naka rakitsary tamin'ny alalan'ny iPhone sy Samsung Galaxy—tranga toa maneso, satria nitarika fanafihana “gadgets” vahiny tao anaty magazay fivarotana elektronika iray ny hetsika teo aloha nataon'i Baretsky ny 27 Aogositra. Nanolo-kevitra izy fa mikasa ny handoro ny fiarany BMW ho an'ny hetsika manaraka hataony, ary hizara ny lahatsary ao amin'ny tranonkala.
Hatramin'ny nanambàrana an'i Krimea tamin'i Rosia tamin'ny 2014, ary ny fidirany an-tsehatra tsy ankiato any amin'ny faritra atsinanan'i Okraina, nanohy ny politikam-panitarana “fanoloana fanafaran'entana” i Moskoa, izay midika fanoloana ny entana avy any ivelany amin'ny vokatra vita ao Rosia. Lasa tranga hafakely amin'ny fiainana politika rosiana ilay hetsika ka, tsy ela akory izay, nanery an'i Vladimir Poutine handà ampampahibemaso hoe lasa “karazana sampy” izany.